साहसी युवक प्रेम खड्का, जसले आठौं पटक जिउदै चितुवा समाते ! – Namaste Dainik
साहसी युवक प्रेम खड्का, जसले आठौं पटक जिउदै चितुवा समाते !
August 8, 2020 NamastedainikLeaveaComment on साहसी युवक प्रेम खड्का, जसले आठौं पटक जिउदै चितुवा समाते !
हरि कुँवर,अर्घाखाँची – अर्घाखाँचीमा साहासी को अर्को नाम प्रेम खड्का हो जसले आठौं पटक जिउँदै चितुवा समाउन सफल भएका छन । सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर – ४ वाग्लाको टुनिपोखरि छाप भन्ने स्थानमा बँदेल लाई थापेको पासोमा परेको पोथी चितुवा लाई समाउन सफल भएका हुन ।खड्काले चितुवालाई जिउँदै नियन्त्रणमा लिएर वन कार्यालयमा बुझाएका छन।
यति बेला पनि प्रेम खड्का ले समातेर सम्मान प्राप्त गरेका थिए । करिब साढे ४ फिट लम्बाई र २ फिट उचाई भएको चितुवा डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीमा जिउँदै चितुवालाई बुझाएको कार्यालय सहायक वन अधिकृत शिला पोखरेलले बताइन् । खड्का लाई कार्यालय ले सम्मान समेत गरेको थियो ।
डाक्टर गोविन्द केसीद्वारा मुगुमा २ जनाको नि:शुल्क शल्यक्रिया, ८४ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण !
कैलालीमा श्राद्धको खाना खाएका एकजनाको मृत्यु, १८ बिरामी
ब्राम्हण जातीलाई गाउँले भाषामा टपरे बाहुन भनिन्छ–डा.बाबुराम भट्टराई ।
स्याङ्जाका प्रहरी प्रमुख सहित थप १८ जनालाई कोरोनाको संक्रमण